जथाभाबी ढुंगा उत्खननले पानीका स्रोत सुक्न थाले – Janaubhar
जथाभाबी ढुंगा उत्खननले पानीका स्रोत सुक्न थाले
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, माघ २०, २०७१ | 181 Views ||
– देबीबहादुर डिसी (अध्यक्ष)
घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था, दाङ
घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाका अध्यक्ष देवीबहादुर डिसी जिल्लाकै एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँले २०६० सालदेखि लगातार कहिले निर्विरोध र कहिले निर्वाचनमार्फत् संस्थाको अध्यक्ष पद सम्हालिरहनुभएको छ । उपभोक्ताहरुको मायाले आफूले संस्थाको नेतृत्व गर्दै आएको डिसी बताउनुहुन्छ । घोराहीमा खानेपानीको अवस्था, समस्या, सम्भावना, संस्थाका गतिविधिलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर डिसीसँग गरिएको कुराकानी । –सम्पादक
तपाईं घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, घोराहीमा खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ?
घोराही क्षेत्रमा खानेपानीको अवस्था पहिलेको तुलनामा अहिले राम्रो छ । अहिलेसम्म यस क्षेत्रका उपभोक्ताहरुलाई सहज रुपमा खानेपानी वितरण भइरहेको छ । साना शहरी खानेपानी आयोजना शुरु भए पनि यस क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या त्यति देखिएको छैन ।
घोराहीमा २०६५ सालदेखि साना शहरी खानेपानीले पानी वितरण गरेको हो । अहिले विभिन्न ५ वटा प्रणालीबाट हामीले खानेपानी वितरण गरिरहेका छौं । १ नम्बरबाट १ सय १०, २ बाट ५ सय, ३ बाट ८ सय, ४ बाट ३ सय र ५ बाट साढे ४ सय घनमिटर पानी अट्ने ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । अहिले हामीसँग १७ लाख १० हजार लिटर पानी अट्ने क्षमता छ ।
घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाले पहिले साँझ र बिहान गरेर दुई पटक पानी वितरण गर्दथ्यो । पछिल्लो समय जनघनत्व बढ्न थालेपछि हामीले क्षेत्र बिभाजन गरेर साँझ र बिहान आलोपालोमा पानी वितरण गरिरहेका छौं । हामीले दैनिक एक समयमा करीब साढे ३ घण्टा पानी वितरण गर्छौं । पहिले संस्थामा धारा संख्या कम भएकाले दुई पटक पानी वितरण गर्न सम्भव भएको हो । त्यतिबेला १ हजार २ सय मात्र धारा संख्या थिए तर अहिले निजी धारा संख्या ५ हजार ३ सय ३४ पुगेको छ । सामुदायिक धाराहरु ३४ वटा छन् ।
बजार क्षेत्रमा एउटै घर तीन÷चार तलासम्म बनेका छन् । ती घरहरुमा डेरा गरेर बस्नेहरुको संख्या पनि बढिरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा घोराही क्षेत्रमा खानेपानीको खासै समस्या नभए पनि भविष्यमा ठूलो समस्या आउने देखिन्छ । जनसंख्या वृद्धि अनुपात निकै धेरै छ । भविष्यका लागि हामीले अहिले सोचेनौं भने पछि दुःख पाइन्छ ।
खानेपानीका लागि भविष्यमा पर्न सक्ने समस्या त भन्नुभयो । ती समस्या पर्न नदिन संस्थाले कुनै योजना बनाएको छैन ?
घोराही खानेपानीको अध्यक्षको हैसियतले म यो विषयमा निकै गम्भीर छु । हाम्रो कार्यसमितिका साथीहरु पनि यस विषयमा चिन्तित हुनुहुन्छ । दुई/चार वर्षपछि आउन सक्ने समस्याका लागि हामी अहिले नै सचेत हुुनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले हामीले खानेपानीको स्रोत संरक्षण गर्नुपर्छ । वन फडानी रोक्नुपर्छ ।
अहिले सिमेन्ट उद्योगहरुको कारण दाङमा पानीका मुहानहरु सुक्न थालेका छन् । जथाभाबी ढुंगाजन्य वस्तुको उत्खनन गर्दा पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ । हामीले यस विषयमा जिल्लामा क्रियाशील सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । मुहान बचाउनको लागि पहल भएको छ । दाङ जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयसँग पनि पहल भएको छ । खानेपानी तथा ढल निकास विभागले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ ।
अहिले घोराहीको गुलरियामा ३ लाख लिटर पानी अट्न सक्ने ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणको पहल भएको छ । त्यसका लागि तीन वटा बोरिङ सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । यसले दक्षिणी क्षेत्रमा पनि वितरणमा सहजता ल्याउनेछ ।
माथिल्लो भरतपुर र काठेकोलमा केही समस्या देखिएको छ । यस क्षेत्रमा पनि खानेपानीको सहज वितरणका लागि कटुवा खोलामा बोरिङ सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । जनसंख्या वृद्धिसँगै खानेपानीका उपभोक्ताहरु बढिरहेकाले हामीले नयाँ नयाँ योजना बनाइरहेका छौं । संस्थाले मात्र पहल गरेर हुँदैन, यसका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । खानेपानी नभइ नहुने कुरा भएकाले यस विषयमा समयमै ध्यान पु¥याउनु पर्छ ।
समग्र दाङमा खानेपानीको स्रोतको अवस्था कस्तो छ ?
जिल्लामा दिन प्रति दिन खानेपानीका मुहानहरु सुक्दै गएका छन् । पानीको सतह पनि घटिरहेको छ । जिल्लामा सिमेन्ट उद्योगहरु खुलेदेखि अझ बढी समस्या थपिएको छ । स्काभेटर र डोजरको प्रयोगबाट जथाभाबी ढुंगाजन्य वस्तुको उत्खनन भइरहेको छ । यही क्रम जारी रहने हो भने अबको १० वर्षभित्र दाङ मरुभूमिमा परिणत हुने निश्चित छ । सिचाई सुविधा पनि रोकिन्छ ।
हामीले मुहान बचाउन पहल गर्नुपर्छ । मुहान नै बचेन भने जति ठूला आयोजना सञ्चालन गरिए पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । हामीले मुहान बचाउनको लागि पहल त गरिरहेका छौं । सरकारले पानीको मुहान बचाउनको लागि ठूला–ठूला परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । बजेटको वृद्धि गरेर मुहान संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
सिमेन्ट उद्योगहरुले सरकारसँग गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरेका छैनन् । उद्योग विभाग र सिमेन्ट उद्योगहरुबीच विभिन्न सम्झौता भएका छन् । वातावरण संरक्षणका लागि ती सम्झौताहरु अक्षरसः पालना गरिनुपर्छ । सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने सिमेन्ट उद्योगहरुलाई बन्द गरिनुपर्छ । विकासको नाममा वातावरण मास्न पाइदैन ।
सबैभन्दा पहिले मानवको स्वास्थ्य हो । मानवको स्वास्थ्य नै रहेन भने आर्थिक विकासको कुनै अर्थ छैन ।
अहिले उद्योगधन्दा खोल्ने नाममा जथाभाबी वातावरणीय पक्षको नास गर्ने काम भइरहेको छ । यसले भविष्यमा विकराल समस्या ल्याउनेछ । सिमेन्ट उद्योगबाट दाङबासीले फाइदाभन्दा घाटा बढी व्यहोर्नुपरेको छ । उद्योग चलाउने नाममा जनताको स्वास्थ्य र खानेपानीमाथि खेलवाड गर्न पाइदैन । संस्थाले मात्र यस विषयमा पहल गरेर हुँदैन । यस क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरुले समयमै यस विषयमा ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।
संस्थाको साधारणसभा नजिकिदै छ, यसको तयारी कस्तो छ ?
यही माघ २४ गते घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको १५ औं साधारणसभा हुँदैछ । यो साधारणसभामा हामीले गत वर्षको आम्दानी र खर्च विवरण प्रस्तुत गर्छौं । साथै आगामी कार्यको योजना प्रस्तुत गर्छौं । गर्मीयामको सुरुसँगै खानेपानीको समस्या अलि बढी देखिन्छ । गर्मीयाममा पानीको प्रयोग निकै धेरै हुने गर्छ । खानेपानीका स्रोतहरु पनि सुक्दै जाने भएकाले समस्या देखिन्छ ।
हामीले खानेपानीको समस्या हुन नदिन ट्याङ्करको व्यवस्था गर्नेछौं । फागुनभित्र संस्थाले ट्याङ्कर सञ्चालन गर्नेछ । खानेपानी नआएको खण्डमा संस्थाले निःशुल्क उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्नेछ । कुनै उपभोक्ताले व्यक्तिगत रुपमा बढी पानी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सहुलियत शुल्कमा संस्थाले उपलब्ध गराउने छ । हामीले आफ्ना उपभोक्ताहरुलाई खानेपानी जसरी भए पनि उपलब्ध गराउने छौं । उपभोक्ताहरुले हामीलाई जिम्मेवारी दिनुभएकाले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार छौं । यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ ।
प्रसंग बदलौं, तपाई खानेपानी संस्थाको अध्यक्ष पदमा सधैं चुनाव जित्नुहुन्छ । कारण के हो ?
यो विषयमा मैले भन्नुभन्दा पनि मेरा उपभोक्ताले भन्ने कुरा हो । म कहिल्यै पनि पदको लागि लडेको छैन । सधैं उपभोक्ताहरुले अध्यक्ष बन्न आग्रह गर्नुहुन्छ । यसमा मैले कुनै कारण पेश गर्ने कुरा आएन । उपभोक्ताहरुले जहिलेसम्म मलाई अध्यक्ष बन्न आग्रह गर्नुहुन्छ तबसम्म म अध्यक्ष भइरहन्छु । जुन दिन मलाई उपभोक्ताहरुले अध्यक्ष छोड भन्नुहुन्छ त्यस दिन छोड्छु ।
बजारमा त घोराही नगरपालिकाको मेयर नहुँदासम्म तपाईंले अध्यक्ष छोड्नुहुन्छ भन्ने चर्चा सुनिन्छ नि ?
(हा हा हा…) मैले खानेपानीको अध्यक्ष छोड्दै छोड्दैन भन्नु त गलत हो । तर, मलाई एक पटक मेयर हुन इच्छा छ । म आम जनताको काम गर्न चाहन्छु । यदि चुनाव भयो भने म मेयरमा लड्नेछु । त्यतिबेला आम नगरबासीहरुले मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । हुन त चुनाव हुने कहिले हो कहिले अहिल्यै नै धेरै हल्ला नगरौं । जे भए पनि म मेयरको चुनाव लड्ने निश्चित हो ।
Prevकमरेड पवनसँग बिताएका यादगार क्षणहरु
Nextशैक्षिक सुधारका लागि अभिभावक शिक्षा